Filipina : Anjatony Ny Maty Sy Nanjavona Tamin’ny Tondradrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2011 9:46 GMT
Hatramin'ny fotoana nanoratana, 440 ireo olona voalaza fa namoy ny ainy tany amin'ny faritra maro tao amin'ny Nosy Mindanao ao atsimon'i Filipina, taorian'ilay tondra-drano Sendong (anarana iraisam-pirenena : Washi) izay namely ilay firenena ny zoma lasa teo, 16 Desambra. Ny isan'ireo niharan-doza dia mety ho mihoatra izany ary mety hahatratra hatramin'ny 600. Tondra-drano mafonja no nifaoka ny tanànan'i Iligan sy Cagayan de Oro raha iny misasakalina natory tsara iny ny mponina. Io no tondra-drano ratsy indrindra namely iny faritra avaratr'i Mindanao iny tao anatin'ny taona maro.
Tao amin'ny Facebook, Keith Obed Ruiz dia nampakatra ireto sary tao amin'ny Cagayan de Oro tondra-drano ireto.
Ankizy mitady ny fananany taorian'ilay tondra-drano
Foibe fanangonana ny olona
Hatramin'ny fotoana nanoratanay , ito sary ito dia nojerena in-13 762 tao amin'ny twitter. Ny hafatr'i @mindanaoan ho an'ny mpamaky
Fampitandremana : Sary mampihoron-koditra – Ray namery ny zanany tao Typhoon #Sendong (rotidrotika ny foko noho izany)
Ilay tondra-drano Sendong dia namely ny faritra hafa tao Filipina. Ito lahatsary manaraka ito dia avy aminà mponina ao Negros Oriental ao amin'ny faritr'i Visayan
Ilay tenifototra #sendong sy #prayformindanao dia nameno ny vohikala ary nampiakarin'ny olona anaty aterineto haingana mba hanaovanao antso ho amin'ny fanohanana
@PaintersWifePH Ho an'ny #Sendong, misy lahatsoratra- ho an'ny fanomezana, misy “Paypal”, misy petra-bola amin'ny banky, tsy misy fialan-tsiny. Na ohatrinona na ohatrinona, ataovy fotsiny!
@marvin_agustin Ray, ianao no fialofanay sy fanantenanay. Manantona anao amin'ny fo feno fahatokiana amin'ny fitiavanao sy ny fiantranao izahay. Mivavaka ho an'ireo niharam-boinan'ny#sendong izahay
@oysterhalfshell manao antso ho an'ny akanjo tonta izahay. Mpiasa maro be no safo-drano ny tranony, ary ankehitriny mialoka ao amin'ny rafozako, ary mila akanjo maina. #sendong
@melcahmay ilay kamiao “pick-up” eo alohanay dia ahitana fatin'olona 2. tao amin'ny biraon'i mamanay, nahitàna vehivavy tsy fantam-pihaviana niharan-doza 2.
Tamin'ny alalan'ny Facebook, Abdel Jamal dia nampahafantatra ny namany mikasika vinavina ezaka vonjy aina
Ry namana manerana izao tontolo izao,
Fantatro fa te hanampy ny tanànan'i Iligan ianareo. Koa dia toy izao ny afaka ataonareo.
Ny namako tany amin'ny Fianarako asa tanana, IDS 2000 an'ny MSU-IIT (MSU-Iligan Foibem-pampianarana Teknolojia), dia manao asa vonjy aina amin'ny alalan'ny programa fanomezan-tsakafo, fanangonana akanjo tonta, ary fanomezana ho an'ny mpiasa. Ilay mpiara-mianatra amiko, Beatriz Arcinas Cañedo, dia hanokatra ny kafeteriàn'ny Kolejim-piofanana ho mpampianatra (DEC) ao MSU-IIT amin'ny 8 maraina rahampitso mba handrindra ilay programa fizaran-tsakafo. Paty, vary, sns no ho andrahoina ao ary “sandwichs”, sns no hokarakaraina ao. Tamin'ny 7 hariva talohan'io, dia nisy fianakaviana 400 (ary mahery) tao amin'ny kianja mitafon'i MSU-IIT , kianja mitafo 1 amin'ireo 10 foibe fanangonana olona. (Izany dia lasa 15 sahady,araka ny vaovao farany.) amin'izany dia hisy “sandwichs” be dia be, paty, sns. Alaivo sary an-tsaina fotsiny. Mbola hitohy hatrany izany mandritra ny andro maro ho avy. Mbola misy mpiara-mianatra maro hafa mitady ny fomba hanampiana anay.
Ireo toeram-pianarana koa dia namadika ny faritry ny sekoliny ho toerana fandraisana ireo niharam-boina. Na ny fety Krismasy aza dia nofoanana. Nanadihady Roberto Yap
Xavier University -Oniversiten'i Ateneo de Cagayan, ao Cagayan de Oro City dia manampy ny Vaomieram-pirenena mandrindra ny Fanampiana ny niharam-boina amin'ny famatsiana fanampiana ara-tsakafo, akanjo ary ara-panafody ho an'ireo niharam-boina tamin'ilay tondra-drano Sendong. Ny toeram-pampianarany ao amin'ny lalàna Corrales dia misokatra ho an'ny fanomezana ara-bola na ny arak'asa. Ilay Anjerimanontolo koa dia mandray ireo niharam-boina vitsivitsy any amin'ny foibe fandraisana vonjimaika ao amin'ny faritry ny sekoly ary mandefa mpitsabo sy mpianatra amin'ny vonjy taitra sy ny fiatrehana ny fahatairana. Ilay klinikan'ny Anjerimanontolo koa dia mivoha mba hitsabona ireo marary. Ilay fety krismasin'ny Anjerimanontolo nokasaina atao ny alin'ny 17 Desambra dia nofoanana noho ny famatsiana vola sy sakafo izay ankalazàna io fety io nomena mba hanavotana ireo niharam-boina. Ny Anjerimanontolo dia nanaiky ny fanomezana tamin'ny fametrahana ny Biraom-panampiana eo am-bavahadiny na ny Foibe anatobiana ireo niharam-boina ao amin'ny ” Satellite Canteen” akaikin'ny Tranoben'ny Kolejin'ny Fambolena (akaikin'ny kianja mitafo). Mpiasa sy mpianatra mirotsaka an-tsitrapo no nozaraina mba hividy, hamono ary hanatitra ny fanampiana manerana ny tanàna, Eo ambany fifehezan'ny ômônien'ny Anjerimanontolo, ny Pretra Eric Velandria SJ.
Rahatrizay ny Xavier University dia mivonona ny hikatsaka sy hametraka fomba maro ahafahana mamatsy fanampiana ireo niharan'ny loza voajanahary ratsy indrindra izay namely an'i Cagayan de Oro City izay tadidy vao haingana.